महिलाहरु सम्पर्क गर्ने बेला किन आँखा बन्द गर्छन् ? यस्ता छन रोचक कुरा – hamrosandesh.com
महिलाहरु सम्पर्क गर्ने बेला किन आँखा बन्द गर्छन् ? यस्ता छन रोचक कुरा
हरेक महिलाहरु यौनसम्पर्क गर्ने बेला आँखा बन्द गर्ने गर्दछन् ।
हरेक दम्पत्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यौन सम्पर्कको बेला महिलाले आँखा बन्द गरेको त देख्नु भएको होला । महिलाहरु किन यौनसम्पर्कका बेला आँखा बन्द गर्छन ? अध्ययन भन्छ, यदि कोही महिला यौनसम्पर्कका बेला आँखा बन्द गर्छिन् भने यसको अर्थ हुन्छ उनी पुरै मजा लिइरहेका हुन्छन् ।
अर्थात पार्टनरले उनलाई चरम सन्तुष्टि दिइरहेका छन् । अध्ययन अनुसार ९३ प्रतिशत महिला यौनसम्पर्कमा चरम सुखको अनुभव तब गर्छन् जब उनको आँखा बन्द हुन्छ । यदि यो समयमा आँखा खुला हुन्छ भने बुझ्नुस् उनको ध्यान आफ्नो पार्टनरमा जान्छ ।
जसका कारण उनले चरम सन्तुष्टि पाउँदैनन् । एउटा अर्को अध्ययनमा यो कुरा पनि स्पष्ट भएको छ कि जून समयमा महिला चरम सुखमा हुन्छन् त्यो बेला उनीहरु चाहेर पनि आँखा खोल्न सक्दैनन् ।
अध्ययनको दाबी छ कि जसरी सुतेको समयमा कसैले चाहेर पनि आँखा खुला राख्न सक्दैन् त्यसैगरी महिलाले पनि चरमसुखको समय चाँहेर पनि आँखा खोल्न सक्दैनन् । यद्यपी त्यो समयमा महिलाको ग्लैड (ग्रन्थी) बाट तरल रफ्तारमा हुन्छ, जसले दिमागलाई आँखा बन्द गर्नका लागि सन्देश दिन्छ ।एजेन्सी